U-Ayanda Ncwane uphumela obala ngokungezwani nomama kaSfiso | isiZulu
U-Ayanda Ncwane uphumela obala ngokungezwani nomama kaSfiso
Ihlukene phakathi imindeni kaSifiso Ncwane
UmkaNcwane ugonyuluke emsakazweni okokuqala ngqa
Durban – Unkosikazi wesihlabani somculo wokholo esingasekho emhlabeni, uSfiso Ncwane, okungu-Ayanda Ncwane, usephumele obala ngobudlelwano "obumuncu" phakathi kwakhe nomamezala, kubika iphephabhuku iDrum.
Engxoxweni abe nayo naleli phephabhuku, u-Ayanda uveze ukuthi ubudlelwano bakhe nomama kaSfiso, uFikile Ncwane, bekungebona ubudlelwano obuhle waphinde wasola umama kaSfiso ukuthi akakaze ambheke ukuthi unjani selokhu kwadlula emhlabeni umyeni wakhe.
OLUNYE UDABA: Umama kaSfiso Ncwane ufuna umbiko wokuhlolwa kwesidumbu sendodana yakhe
“Akakaze asibheke. USfiso wayemayelana nokwelapha ngezingoma. Ngangicabanga ukuthi umngcwabo uzosenza sibumbane,” usho kanje.
U-Ayanda uyiphikile imibiko yokuthi wayefihlela umamezala ulwazi ngokushona komyeni wakhe, wathi okunalokho uyena (u-Ayanda) owathumela imoto ngokushesha ngenhloso yokulanda umamezala ukuze khona bezokwenza yonke into ndawonye.
Kule ngxoxo u-Ayanda uphinde wadalula nokuthi uSfiso wayesafuna ukuba nezinye izingane, ikakhulukazi ingane yentombazane.
Kuzokhumbuleka ukuthi u-Ayanda waba nengxoxo yokuqala ngqa emphakathini nomsakazo uKhozi FM ngaphambilini kule nyanga kulandela ukushona komyeni wakhe ngokuzuma.
USfiso washona ngomhlaka-5 kuDisemba ngonyaka odlule esibhedlela iFourways Life Hospital kulandela ukuxinwa ukugula okuphathelene nezinso.